काठमाडौं/पहिचान – छोरा होस् या छोरी, किशोरावस्थामा पुगेपछि बिस्तारै सबैको शरीरमा शारीरिक परिवर्तनहरु आउने गर्छन्। किशोरीहरुको हकमा कुरा गर्दा, उसको बढ्दै गरेको स्तन र परिवर्तन हुँदै गरेको उसको शारीरिक आकार प्राकृतिक प्रक्रिया हो। वास्तवमा महिलाको स्तन, यौनाङ्ग केवल शरीरका केही अङ्ग मात्र नै हुन्। प्राकृतिक रुपमा हरेक मानिसको यौनिकता, सृष्टिको एक प्रक्रिया हुँदाहुँदै पनि त्यही स्तन, त्यही यौनाङ्गले महिलाको लागि पलपल ज्यानको जोखिम खडा गरिदिएको हुन्छ। नेपालमा व्याप्त कुप्रथा तथा संकुचित सोचहरुले वास्तवमा महिलालाई महिला भएर बाँच्न पनि दिएको छैन। यो महिला माथि हुँदै आएको लैंगिक विभेद, सामाजिक अन्याय तथा मानव अधिकारको हनन हो।
अहिलेको शिलशिलामा किशोर किशोरीहरुले पोर्न मार्फत यौनका ज्ञान हासिल गर्ने गरेका छन्। पोर्न कदापि यौनको सही सूचना दिने स्रोत होइन, बरु हाम्रो यौन ग्रन्थ “कामसूत्र” हुन सक्ला। त्यसै गरेर यूवट्युब च्यानलमा आउने “सेक्स च्याट विथ पप्पु एण्ड पापा” भन्ने कार्यक्रम उत्कृष्ट हुन सक्दछ, जसमा आफ्नो सन्तानलाई सानै देखि कसरी यौनका शिक्षा दिन सकिन्छ भन्ने बारेमा देखाइने गरिन्छ। त्यस्तै यौन शिक्षाको कुरा गर्दा प्रसिद्ध विचारक तथा धार्मिक गुरु ओशो को “सम्भोग देखि समाधिसम्म” भन्ने पुस्तक पनि एक राम्रो स्रोत हुन सक्दछ। उक्त पुस्तकमा यौनलाई अध्यात्मसँग जोडेर राम्रोसँग व्याख्या गरिएको छ। धेरै धार्मिक ग्रन्थहरुमा यौन समागम नगर्नु भनेर ज्ञान दिने गरिन्छ तर जे सिकाए पनि मानिसले यौनक्रिया गर्छन् नै, चाहे त्यो हस्तमैथुन होस् वा बलात्कार। ओशो को उक्त पुस्तकमा स्वस्थ यौन सम्बन्ध र आफ्नो सहमित्रप्रतिको सम्बन्ध कस्तो हुनु पर्दछ भनेर राम्ररी ब्याख्या गरिएको छ।
अब चौथो कुरा, यदि कसैको बलात्कार हुन्छ भने समाजले र राष्ट्रले त्यो बलात्कारीलाई र बलात्कारको शिकार भएकी पीडितलाई कसरी व्यवहार गर्दछ भन्ने पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। नेपाली समाजमा यदि कुनै महिलाको बलात्कार भयो भने उसलाई उसको परिवार, समाज, आफन्तले समेत सामाजिक लान्छना लगाउँछन्। राष्ट्रको कुरा गर्ने हो भने एक पीडितले सर्वप्रथम उजुरी गर्न जाने ठाउँ भनेको पुलिस थाना हो, पुलिस थानामा समेत जब बलात्कारको घटना प्रहरी प्रसाशनसम्म पुग्दछ त्यहाँ दोहोरो चहलखेल सुरु हुन थाल्दछ। बलात्कारको घटना यति संवेदनशील छ तर अनुसन्धानको क्रममा जब प्रहरी प्रश्नमाथि प्रतिप्रश्न गर्छन्, ती पीडित व्यक्ति झन् हिंसाको चपेटामा पर्दछन्। जब प्रहरी जो जनताको सुरक्षाको लागि खटेका हुन्छन्, उनीहरुबाट नै सुरक्षाको प्रत्याभूति हुँदैनन् भने कसरी एउटा जनताले सुरक्षित भएको महसुस गर्ने? बलात्कारजस्तो संबेदनशील घटनालाई पनि मिलापत्रमा मिलाइदिने, पीडितलाई झन् उम्कने मौका दिने, तारिखमा छोड्न लगाउने न्यायदाताबाट नै पीडित झन् हिंसामा पार्छिन् तब सुरक्षा अनि न्यायको लागि कता जाने? कसको ढोका घच्घच्याउने? कानुन जतिसुकै कडा बनाए पनि मुद्दा अनुसन्धानको प्रक्रियामा जाँदा जुन किसिमको तनाव, असुरक्षा अनि आर्थिक चलखेलमा वास्तविक कुरालाई बंग्याइदिने, प्रमाण नष्ट गरिदिनेदेखि लिएर साक्षीलाई डरत्रास देखाएर बयान फेर्न लगाउनेजस्ता कार्यले पीडित झन् पीडामा पर्छ।
त्यतिमा मात्र होइन, बलात्कारको घटनालाई आफ्नो पत्रिकामा समाबेश गराउनको लागि जुन किसिमको तस्बिरहरु प्रकाशित गरिन्छ, ती तस्बिरले पीडकले भन्दा बढी बलात्कृत गरिराखेको हुन्छ। यस्तो संबेदनशील घटनामा पीडितको मर्म बुझिदिएर त्यसै अनुरुप साथ र सहयोग गर्न सके यस्ता घटनालाई न्यूनीकरण गर्नमा साथ पुग्छ। जसरी अहिले विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुले फलोअप समाचारहरुमा त्यही घटनामा आधारित रहेर जुन किसिमको जानकारी दिने गर्छन्, त्यसले पनि घटना कुन मोडमा पुगेको छ, न्याय पाउने स्थिति के छ भन्ने सर्वसाधारणलाइ जानकारी हुन्छ। यसले गर्दा त्यस घटनालाई एउटा निकास दिन टेवा पुग्छ।
महिलामाथि हुने कुनै पनि यौन दुर्व्यवहारलाई राज्यविरुद्धको जघन्य अपराधको रुपमा परिभाषित गरिनुपर्छ। बलात्कारीहरुलाई हदैसम्मको कानुनी सजाय दिइनुपर्दछ। न्याय प्रक्रियामा जाँदा पीडित अनि साक्षीको सुरक्षाको व्यवस्था, न्याय सम्पादन प्रक्रिया इमान्दारपूर्वक गर्न सके पीडितले न्याय पाउने थिए। बल्ल हिंसामुक्त समाजको लागि सकारात्मक सन्देश जाने छ। अर्को महवपूर्ण कुरा, महिलाहरुको अस्तित्वको खोजी उसको यौनाङ्गमा हुने झिल्लीसँग जोडिनु हुँदैन। महिलाको हकहित, सुरक्षा, सम्मान र मानव अधिकारको लागि हामी सबै जनाले हाम्रो सोचहरुलाई फराकिलो बनाउँ, कृपया हामी सबैजना महिलाको यौनाङ्गमा हुने झिल्ली “भर्जिनिटी” बाट बाहिर आऔं।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा, पुरुषहरुले महिलाहरुको सुरक्षा गर्नु पर्दछ भन्ने सोचलाई परिमार्जित गरी महिलालाई आफ्नो सुरक्षा आफै गर्न आर्थिक, भौतिक, बौद्धिक, अध्यात्मिक र नैतिक रुपमा सबल बनाऔं। एउटा हिंसारहित सुन्दर र समानता मुलक समाजको लागि हरेक महिला, पुरुष र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका सबैले प्रतिबद्धता जनाऔं।
साभार : देश सञ्चार